Godadka dabka ee bannaanka si ay diirimaad u siiyaan barxaddaada ama beertaada | Bezzia
Maria vazquez | 13/05/2022 18:00 | Qalabka guriga
Ma waxaad soo jeedisay dhamaadkii xagaagii hore in sanadkan aad dib u habeyn ku sameyso meelaha bannaanka ah? Bilow isku-darka walxaha aan ku soo kordhinayn shakhsiyaddooda balse sidoo kale ka dhigaysa kuwo sii shaqaynaya. Alaabta sida godadka dabka dibadda in aan soo jeedino maanta.
braziers-ka ayaa ah waxa aad raadinayso si aad u awoodo inaad kordhiso wakhtiga aad ka faa'iidaysanayso beertaada ama barxaddaada. Waxay yihiin farshaxan inta lagu jiro maalinta waxayna sameeyaan meelaha bannaanka ah ee muuqda ka diiran habeenada qabow Xagaaga. La qabso cabbirkeeda iyo qaabkeeda bannaanka bannaanka oo isbeddel samee!
1 Sababaha loogu daro brazier booskaaga bannaanka
2 Noocyada brazier
3 Bir leh qaabab wareegsan
4 dhagax bioethanol braziers
Sababaha loogu daro brazier booskaaga bannaanka
Ma wax baa ka maqan booskaaga bannaanka? Mararka qaarkood waxaan leenahay dareenkaas laakiin aad uma cadda waxa ay tahay in aan ku darno si uu u baabi'iyo. Godka dabku wuxuu noqon karaa waxa aad raadinayso - Dabcan, waxaa jira sababo badan oo aad u rabto in lagu daro mid ka mid ah naqshadaynta bannaankaaga bannaanka:
Waxay u ogolaataa ka faa'iidaysiga meelaha bannaanka sidoo kale gudaha habeenada ugu qabow xagaaga.
Iftiimin barxadaha iyo jardiinooyinka inta lagu jiro habeenkii, oo bixiya iftiin dhow oo diiran.
Waxay noqdaan curiye ku wareegsan soo ururi qoyska.
Waxay ku daraan shakhsiyad iyo diirimaad naqshadaynta bannaanka bannaanka
Kuwa xaabada ama dhuxusha guba Waxa loo isticmaali karaa sidii shiilan. Dhab ahaantii, naqshadaha intooda badani waxay ku daraan mid.
Waxaan u kala saari karnaa braziers iyadoo loo eegayo walxaha ay ka samaysan yihiin ama qaabka ay qaataan. Waxaan go'aansanay, si kastaba ha ahaatee, inaan ku sharadno hybrid muujinta noocyada ugu caansan ee braziers, labadaba kuwa kuu fududaan doona inaad hesho
Bir leh qaabab wareegsan
Maalintii waxay u dhaqmaan sida farshaxan beerta dhexdeeda Qorrax-dhacana waxay noqdaan brazier, iyaga oo ka dhigaya qayb ku habboon in lagu qurxiyo barxaddaada, barxadda ama beertaada. Godadka dab-damiska ee budada-madow ee dahaarka leh ayaa ah kuwo qurux badan, inkastoo ay tahay naqshadaha oksaydhka ah ee ku habboon in la rogo madax oo lagu daro taabasho avant-garde bannaankaas bannaanka ah.
Biraha birta ah ee leh qaababka wareegsan ayaa si gaar ah ugu habboon qurxinta meelo yar oo bannaanka ah maadaama aad ka heli doonto naqshado dhexroorkoodu yahay 51 sentimitir oo kuu sahlaya inaad la qabsato kuwan. Waxaad u baahan doontaa, haa, meel kale oo yar oo aad ku kaydiso xaabada aad ku gubi doonto.
Faa'iidada kale ee lagu xisaabtamayo braziers biraha waa inay yihiin dhaqaale ahaan la heli karo; waxaad ka heli kartaa €150. Intaa waxaa dheer, way ka fudud yihiin kuwa kale, kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad beddesho meelaha markaad u baahan tahay inaad si kale u isticmaasho.
dhagax bioethanol braziers
Silhouette casriga ah iyo khadadka nadiifka ah ee godadka dabka dhagaxa ayaa ku dari doona qaab kasta oo bannaanka ah, weyn ama yar. Isticmaalka bioethanol sida shidaalka, waxay ka dhigi doontaa isticmaalka mid sahlan oo nadiif ah.
Waxaad ka heli kartaa nooca braziers oo leh qaabab wareegsan ama leydi ah. Kuwa hore waxay si gaar ah ugu raaxaystaan ​​meelaha bannaanka ah oo leh jawi deggan oo la yaqaan. Kuwa leydi-xagalka ah ee lagu daboolay dhagax, Dhanka kale, waxay bixiyaan bilic aad u casri ah.
Iyadoo aan loo eegin naqshadooda, kuwan dab-damiska dibadda waxaa ka buuxa dhagaxyo iyadoo la adeegsanayo cabbirka iyo midabka labadaba si loogu ciyaaro qaabka. Dhagaxyadan waxaa loogu talagalay in lagu qariyo gubanaya, ka sokow biotenaol, waxay la shaqeyn kartaa shidaal kale. Inta badan braziers-yadu waxay leeyihiin biloowga gacanta, laakiin sidoo kale waa suurtogal in lagu helo bilow koronto. Qiimehee? Mid, dabcan, aad uga gaar ah.
Dibadeedka ka samaysan shubka ama dhagaxa, braziers-yadani way ka culus yihiin biraha birta ah. Kuwa waaweyn waxaa loogu talagalay inay yeeshaan a meel go'an oo beerta ah, markaa waa inaad si taxadar leh uga fikirtaa sidii aad ugu dari lahayd naqshadaynta.
Qaar ka mid ah kuraasta joogtada ah, fadhiga beerta ama kuraasta qaar si ay ugu hareereeyaan brazier-ka dibadda oo ay u habeeyaan booskaaga bannaanka. Uma baahnid wax badan si aad ugu raaxaysato habeenka xagaaga. Ku naso iftiinka dayaxa ama waqti la qaado qoyska iyo asxaabta habeennada xagaaga ee dabka agagaarka iyo sixirkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qalabka guriga » Godadka dabka ee bannaanka si ay u kululeeyaan barxaddaada ama beertaada
Cagaar dhaqid, dhaqan suuqgeyneed "cagaaran".